Zifa Yokurudzirwa Kupa Mapeza Basa reKukocha Zimbabwe Warriors
Chikumi 13, 2017
Murairidzi wemaWarriors, Norman Mapeza, avaka hushamwari hwakasimba neveruzhinji vanotevera chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors.
Vanofarira chikwata ichi vanoti veZimbabwe Football Association vanofanira kutenda Norman Mapeza nebasa guru raakaita rekudambura Liberia 3-0 nekumupa basa rekurairidza chikwata chenyika ichi kusvika rwendo rwe 2019 Africa Cup of Nations rwasvika kumagumo.
Mapeza akafanobata basa iri kwenguva pfupi veZifa vachitsvaga murairidzi achatsiva Kalisto Pasuwa.
Asi muteveri wemaWarriors ane mukurumbira, vaChris Romario Musekiwa, vanoti veZifa havafanire kutarisa kumwe asi kupa Mapeza basa racho.
VaMusekiwa vasimbisa mafungiro evazhinji vanotevera nhabvu munyika avo vari kuti hazvishande kutsvaga mumwe murairidzi makundano aya atanga.
Mutsigiri wemaWarriors, VaWilliam Mahoko, avo vanogara muWestlea muHarare, vanotiwo ino yave nguva yekuti Mapeza ashandise penzura yake kunyora zita rake pagwaro rebasa remaWarriors.
Mumwe mutsigiri wemaWarriors uyo anoti anozivikanwa nezita rekuti Kaka, anotiwo Mapeza asatarise shure sezvo ane rutsigiro rweZimbabwe yese mukuita basa rake.
Muongorori wemutambo wenhabvu uyezve aimbotambira maWarriors, Alois Bunjira, anoti Mapeza avaka hukama hwakasimba nevatambi vake zvekuti zvakakosha kuti hukama uhu husimbiswe nekumupa basa kuti arambe ane vatambi vake semhuri imwe chete.
Murairidzi wemaWarriors ari kutarisirwa kuendesa chikwata ichi kuma 2019 Africa Cup of Nations kubva mugungano rezvikwata zvina zvinosanganisirawo Democratic Republic of Congo, Congo Brazzaville, pamwe neLiberia.
Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chichaenda kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon